Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda & Waxyaabihii Ay Wargeysyada Ugu Waaweyn Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Jimce Ah. - Gool24.Net
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda & Waxyaabihii Ay Wargeysyada Ugu Waaweyn Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Jimce Ah.
Neymar ayaa maanta si kama dambays ah u qarxin doona hadalkii la sugayay waxaana uu kasoo muuqan doonaa TV laga leeyahay dalkiisa Brazil oo uu kaga hadli doono mustaqbalkiisa iyo haddii uu Barcelona ku biirayo. (Sport)
Juventus ayaa ugu dambayn ogolaatay inay bixiso dhammaan 75-ka Milyan ee ay Ajax ku dalbayso daafaceeda Matthijs De Ligt waxaana la filayaa inay si kama dambays ah saxaafada ugu soo bandhigto Sabtida heshiiskan daba dheeraaday. (Sport)
Paul Pogba ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaadhay kooxda tartanka weyn ugu jirta ee Real Madrid oo sanadkii ku heli doono 13 Milyan oo euro balse haatan caqabada ayaa ah in Madrid ay heshiis la gaadho Man United oo 180 Milyan dalbanaysa. (Diario Goal)
Antoine Greizmann => Barcelona
Barcelona ayaa maanta oo Jimce ah bixin doonta lacagaha 120-ka Milyan ah ee lagu bur-burin karo heshiiska Greizmann ee Atletico Madrid waxaana la filayaa inay maalinimada Isniinta ah saxaafada usoo bandhigi doonto. (Mundo Deportivo)
Ousmane Dembele => Liverpool
Barcelona ayaa haatan ogolaatay inay iibiso da’yarkeeda Ousmane Dembele oo ay 100 Milyan ku qiimaynayso waxaana ay bar-tilmaameedka Liverpool u ogolaan doontaa inuu u wareego Anfield si ay lacag ugu hesho heshiisyada Neymar iyo Greizmann. (Calciomercato & Sky Sports)
Sergej Milinković-Savić => Man United
Manchester United ayaa wali sii wada shaqada ay ku doonayso soo xero galinta khadka dhexe ee kooxda Lazio ee Sergej Milinković-Savić waxaana ay kooxda ree Talyaani u gudbinayaan dalab 80 Milyan ah. (Di Marzio)
Dani Alves => Manchester City
Manchester City ayaa dib usoo cusboonaysiin doonta dadaaladii ay ku doonaysay 36 jirka ree Brazil ee Dani Alves oo markale isku soo muujiyay Copa America. (Globoesporte)
Idrissa Gueye => Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain ayaan wali ka hadhin loolankii khadka dhexe ee kooxda Everton ee Idrissa Gueye waxaana ay haatan Toffees miiska u saareen dalab cusub oo 30 Milyan ah. (L’Equipe)
Lukaku ayaa kusii adkaystay go’aankiisa ah inuu iskaga tago Man United xagaagan kaddib markii uu tababare Ole Gunnar Solskjaer u sheegay inuu joogo oo uu booskiisa u dagaalamo xilli uu xiiso weyn ka helayo Inter Milan. (ESPN)
Dani Ceballos => Arsenal
Kooxda tababare Unai Emery ee Arsenal ayaa u muuqata mida haatan gacanta sarre ku leh tartanka loogu jiray khadka dhexe ee Real Madrid ee Dani Ceballos oo ay kula loolamaysay Tottenham (Marca)